December 2015 - Page 42 of 44 - iftineducation.com
aadan21 / December 2, 2015
iftineducation.com – Hadaba Waxa laga yaabaa in rag badani kolka ay biyabbaxaan, u qaataan in hawshii galmadu ay dhammaatay, dabeetana intay dhinaca kale u jeestaan khuuro billaabaan, iyaga oon dheg jalaq u siin dhibaatooyinka uu falkoodaasi u geysanayo haweeneyda. Hadii uu ninku xaaskiisa u tago isagoon rabitaankeeda si wanaagsan u kicin ama isla markuu ka rito dhabarka u jeediyo, dhibaato xoog…
Quraan iyo Hees meel ma isla galaan -Daawo Qaladka Tv-gan
iftineducation.com – TV-ga Horn Cable ee ku hadla Af-ka Soomaaliga, Ayaa ihaaneystay Quraanka Kariimka ah ka dib markii ay Aayado Quraan ah ku fureen Xaflad tartan heeseed ah, oo ay u qabteen dhalinyaro ku nool Magaalaa Hargeysa.Falkan uu ku kacay TV-gan ,Ayaa ah wax aad looga carooda Islamarkaana loo canbaareeyo waayo waa gaf iyo ihaano in Aayado Quraan ah lagu furo…
iftineducation.com – 30-kii November 1853-kii, maanta oo kale waxa dunida ka dhacay oo la xasuustaa guushuu Ruushku ka soo hooyey dagaalkii qadhaadhaa ee mudada dhex marayay dawladdii Cusmaaniyiinta, waana maalintii Cusmaaniyiinta lagu jebiyey dagaalkii Sinop ee dhinaca badda waana dagaalka loo yaqaano (Dagaalkii Qaram). 30-kii November 1854kii, maanta oo kale waa maalintii Xaakimkii wadanka Masar Maxamed Saciid Baasha uu ogolaanshaha u…
40 kun oo ka barakacday Gaalkacyo
iftineducation.com – Qaramada Midoobay waxay sheegtay in 40, 000 qof ay ku barakaceen dagaalkii dhowaan ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka MUdug. Afhayeen u hadlay Qaramada Midoobay (Stephane Dujarric) waxaa uu sheegay in 30 qof ay ku dhinteen dagaallada Gaalkacyo, oo u dhexeeya maamullada Galmudug ee bartamaha Soomaaliya iyo Puntland, ee woqooyi bari dalkaas. Qaramada Midoobay waxay sheegaysaa in dadka…
Asad oo amaanay howlgalka Ruushka ee Suuriya
iftineducation.com – Madaxweynaha dalka Suuriya Bishar Al-asad waxa auu sheegay in faragelinta Ruushka uu ku sameeyay dagaalka dalkiisa ay wax badan ka badashay dheelitirnaanta dhulka. Wareysi uu siiyay TV laga leeyahay dalka Czech, Mr Asad waxa uu ku sheegay in wixii ka dambeeyay markii Ruushka uu bilaabay duqeymaha in kooxda Daacish iyo kuwa kale ee jihaad doonka ah ay bilaabeen inay…
Diyaaraddii AirAsia Cilad ayay la burburtay
iftineducation.com – Cilad farsamo ayay ahayd wixii ugu waynaa ee dhaliyay in ay burburto diyaaraddii AirAsia ee kudhacday badda Java bishii labo iyo tobnaad ee sanadkii hore, taas oo ay ku dhinteen 162 qof ee saarnaa diyaaraddaasi sida ay sheegeen saraakiil Indonosean ah. Waa warbixintii ugu horaysay ee faahfaahsan ayaa lagu ogaaday in masiibadda ay gacan ka gaystay markii ay shaqaalaha…
US: Ruushka iyo Turkigu xaaladda ha dajiyaan
iftineducation.com – Madaxwaynaha dalka Maraykanka Barack Obama, ayaa ku baaqay in Turkiga iyo Ruushku ay hoos u dhigaan dareenka ka dhex taagan, todobaad kaddib markii ay Turkigu soo rideen diyaarad dagaal oo Ruushku leeyahay. Kaddib markii uu Obama wadahadal kula yeeshay Paris, madaxwaynaha Turkiga Rajab Dayib Erdogan, wuxuu mar kale u xaqiijiyay in Maraykanku ay taageerayaan xaqa ay Turkigu u leeyihiin…
Haddii Madoobe & Gaas ay dagaalka Gaalkacyo qabiileeyaan, Guuleed ayaan la safan doonnaa!!
iftineducation.com – Yuusuf Xusein Samater oo kamid ah Odayaasha kasoo jeeda Magaalada Gaalkacyo qeybta Galmudug ay maamusho ayaa sheegay in dhowr jeer ay isku dayeen inay xaliyaan Colaada u dhexeesa Galmudug iyo Puntland balse ay ka xalin waayen C/weli Gaas aawgii. Yuusuf waxa uu sheegay in arrinta colaadaani ay kala hadleen C/weli Gaas balse ay kala kulmeen dhaqan aysan ka fileynin,…
Al-shabaab oo gudaha u gashay, lana wareegtay degaano ka tirsan gobolka W/bari ee dalka Kenya.
iftineducation.com – Wararka laga helayo magaalada Gaarisa ee gobolka Waqooyo Bari dalka Kenya ayaa sheegaya in Dagaal yahano ka tirsan xarakada Al Shabaab ay la wareegeen Degaan lagu magacaabo Kambere oo kaabiga ku haya magaalada Gaarisa. Wararka ayaa sheegaya in Al-shabaab halkaasi ay ka taageen calankooda, isla markaana ay ugu khudbeeyeen dadka Degaanka waxaana qabashada Al-shabaab ee Degaankaasi ay timid kadib…
DEG DEG: Daacish oo la wareegtay Gobol ku yaalla Soomaaliya
iftineducation.com – Ilo wareed lagu kalsoon yahay ayaa waxay usheegeen iftineducation.com in Dagaalamayaal daacad u ah Kooxda Daacish ay la wareegeen gobol ku yaalla Dalka Soomaaliya. Wararka waxay sheegayaan in Daacish ay ku biireen Rag ka goostay Al Shabaab kuwaasi oo fikirkooda la dhacay kana baxay mabda’ii ay Shabaabka Soomaaliya aaminsanaayeen. Deegaano ay Shabaabku kaga sugnaayeen Gobolka Gedo waxa lasoo…